Programme PROSPERERAntsirakoraka, Distrika VAVATENINA: Lasa mpamboly katsaka matihanina i BENAHODY Cécilien - Programme PROSPERER Antsirakoraka, Distrika VAVATENINA: Lasa mpamboly katsaka matihanina i BENAHODY Cécilien - Programme PROSPERER
Tanora lahy 26 taona i Andriamatoa Cécilien. Nijanona tamin’ny fianarany teo amin’ny kilasy faha-fito izy. Manambady ary manan-janaka iray. Manoloana izany te hioitra amin’ny fiainany izy. Nisafidy ny hanao seha-pihariana katsaka izy. Liana dia liana i Andriamatoa Cécilien raha nahare fa ny fandaharan’Asa FANOITRA dia mitondra tohana amin’ny tanora tsy an’asa sady tsy mianatra mba hidirany amin’ny sehatry ny asa. Ny taona 2014, isan’ny tanora niofana tamin’ny tekinika fambolena katsaka nandritra ny Telo volana tao Antsirakoraka izy.
Vita ny fiofanana, nahazo fampitaovana avy tamin’ny fandaharan’Asa ireo izay nahavita ny dingana rehetra hatramin’ny farany ho entina manomboka ny fihariana. Avy hatrany dia nanohy ny asa fambolena katsaka izy sady efa asa nivelomany rahateo izio na dia mbola tsy nanaraka ny fiofanan’ny tanora izy. Nanapa-kevitra hiditra ho isan’ny mpikambana ao anaty koperativa TSY LANY TSARA izy nanomboka tamin’ny taona 2017. Nanomboka teo tafiditra amin’ny antsoina hoe « Mpandraharaha madikika » izy.
Maro isan-karazany ny tohana azon’ireo mpikambana ao anaty koperativa toy ny fiofanana fitantanana, hay varotra, toetsaina mpandraharaha, fandrafetana ny drafitr’asa fampandrosoana (BP), nahazo fitaovana amin’ny antsasa-bidiny, fiofanana fanabeazana ara-bola, efa nisolo tena ny koperativa niatrika varotra fampiratiana koa izy. Ny tena lehibe indrindra dia efa mandray anjara mavitrika amin’ny fanatanterahana fifanarahana ara-barotra miaraka amin’ny mpividy vokatra katsaka izay nanaovan’ny koperativa sonia izy.
Mampihatra antsakany sy andavany ny fiofanana ara-tekinika voarainy i Andriamatoa Cécilien. Mitombo tsikelikely ny velaran-tany iasany ary miakatra manaraka izany koa ny vokatra azony. Raha tsy namokatra afa-tsy 350kg izy tamin’ny 2014, efa niakatra 1500kg izany tamin’iny taom-piotazana 2019 iny. Izany hoe nitombo avo efatra heny ny vokatra vokariny.
Tena hita fa tovovahy mioitra amin’ny fiainana tokoa i Andriamatoa Cécilien. Nanao tahiry tsikelikely isantaona izy nanomboka tamin’ny taona 2018 satria manana faniriana hanova ny trano ipetrahany izay vita amin’ny volobe mba ho lasa trano simenitra.
Tanteraka ny nofinofin’i Andriamatoa Cécilien ka vita soa amantsara ny tranony izay mirefy 07,5m ny andavany ary 05 metatra ny ampihiny tamin’ny volana Janoary 2020 ity. Sady notombo rahateo koa ny haben’nilay trano satria raha iray efitra izy taloha dia lasa roa efitra izy amin’izao fahavitany zao.
Efa manomboka manangom-bola sahady indray i Andriamatoa Cécilien mba ahafahany handoko ity trano keliny ity sady hanao rary vato ny eo amin’ny tokotany anoloana.
Hampihatra ny toe-tsaina mpandraharaha zay niofanany ihany koa i Andriamatoa Cécilien. Hany ka mikasa hanitatra ny asa fivelomany eo amin’ny sehatra fiompiana kisoa izy satria tsapany fa afaka mifameno amin’ny voly katsaka izany seha-pihariana izany.